पति पत्नी बिच जती झगडा , सम्बन्ध त्यतीनै मजबूद ! |
पति पत्नी बिच जती झगडा , सम्बन्ध त्यतीनै मजबूद !
On: २०७६ असार १३ गते, शुक्रबार, १२:१९ बजे प्रकाशित
काठमाण्डौ । हामीमध्ये धेरैको जीवनसाथी या पति पत्नीसँग कुनै पनि कुरा वा विषयमा विवाद वा झगडा समान्य कुरा हो । कतिपयले यसलाई नराम्रो रुपमा लिएपनि एक अध्ययनका अनुसार पतिपत्नी या जीवनसाथीबीचको झगडाले सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन सहयोग गर्छ ।
एक नयाँ अध्ययनले जीवनसाथीसँगको केही विषय वा कुरामा भएको झगडा वा वादविवादले सम्बन्ध थप मजबूद बनाउने छ । १ हजार मानिसमा गरेको अध्ययन अनुसन्धनका क्रममा पत्ता लागेको तथ्य अनुसार जुन जोडी कुनै कुरामा आफ्नो साथीसँग झगडा गर्छन् उनीहरु अन्य जोडीको तुलनामा १० गुणा धेरै खुसी रहन्छन् । जो जीवनसाथीसँगको कुराकानी वा झगडापछि रिसाएर एक्लै बस्छन् उनीहरुको तुलनामा झगडा गर्नेहरुबीचको सम्बन्ध थप राम्रो हुन्छ ।
अध्ययनका मुख्य लेखक जोसेफ ग्रिनिका अनुसार केही जोडी केही महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरामा आफ्ना साथीसँग झगडा गर्नबाट टाढा भाग्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि यस्ता विषयमा विवाद गर्दा जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध टुट्न जान्छ । तर अध्ययनमा सहभागी भएका ५ मध्ये ४ मानिसले पार्टनरसँग सम्बन्ध खराब हुनुको खास कारण राम्रोसँग कुराकानी नहुनु हो । तर ग्रिनिले बताए अनुसार केही जोडीले आफनो भावनालाई ठीक रुपमा बुझ्न सक्दैनन् ।
उनीहरुलार्ई कुन स्थितिमा कस्तो खालको व्यववहार गर्न आवश्यक छ भन्ने हेक्का वा जानकारी नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । खराब सम्बन्धको सबै दोष साथि माथि लाइदिन्छन् जसका कारण समस्या थप जटिल बन्न जान्छ ।
२०७६ असार १३ गते, शुक्रबार, १२:१९ बजे प्रकाशित